प्याजका १० फाइदा, क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको औषधि - Taja Report
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीप्याजका १० फाइदा, क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको औषधि
प्याजका १० फाइदा, क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको औषधि
July 12, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on प्याजका १० फाइदा, क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको औषधि
प्याज खाएपछि मुखबाट गन्ध आउँछ । सोही कारण कतिले प्याजलाई मन पराउँदैनन् त कतिपयले धार्मिक मान्यताका कारण पनि प्याजको सेवन नै गर्दैनन् । तर प्याज खाएपछि केहीबेर गन्ध आएपनि वा धार्मिक मान्यताधारीहरुले नरुचाएपनि यो निकै हितकारी खाद्यपदार्थ हो । विज्ञहरुका अनुसार प्याजमा निकै लाभदायक तत्वहरु पाइनुका साथै यसमा औषधिय गुण समेत पाइन्छ । प्याज खानुका मुख्य फाइदाहरु यस्ता छन् –
१, क्यालोरी दहन गर्न – बढि क्यालोरीयुक्त खाद्यपदार्थ खानाले मोटोपना लगायतका समस्या आउन सक्छ । तर प्याज यस्तो खाद्यपदार्थ हो जसले क्यालोरी दहन गर्न मद्दत गर्दछ । प्याजले कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउन सहयोग पूराउँछ ।
२,महिनावारीको बेला हुने पीडा कम गर्न समेत प्याजको सेवन लाभदायक हुन्छ । प्याजमा हुने तत्वले पेन किलरको काम गर्छ । सामान्यतया महिनावारी हुने नियमित समयको ४(५ दिनअघि देखिबाट नियमित रुपमा प्याज खाने गरेमा महिनावारी हुँदा दुखाइ बढि हुने महिलालाई फाइदा पुग्छ ।
३, दागधब्बा हटाउन सहयोग गर्छ । प्याजमा हुने भिटामिन सी तथा एन्टिसेप्टिक तत्वले डार्क स्पट तथा कालो पोतो कम गर्दछ । प्याज पिँधेर त्यसको लेप दहिमा मिलाएर अनुहार तथा सरीरमा लगाउनाले जिउमा भएका दाग धब्बा कम हुन्छ ।
४, प्याजमा क्यान्सर प्रतिरोधी तत्व हुन्छ । प्याजको नियमित सेवनले टाउको, घाँटी तथा पेटको क्यान्सरको खतरा कम गर्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । प्याजमा हुने अर्गानोसल्फ तत्वले क्यान्सर प्रतिरोधी तत्वको रुपमा काम गर्छ । यसले क्यान्सर जन्य कोषलाई रोक्दछ ।
५, प्याजको सेवनले रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ । प्याजमा हुने फाइटोकेमिकल्सले जिउमा भिटामिन सी को प्रभाव बढाउँछ र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।
६, दिनहुँ प्याजको सेवनले रुघाखोकी तथा चिसोको समस्या पनि कम गर्छ ।
७, प्याजमा एन्टी फ्लामेटरी तथा एन्टी सेप्टिक र एन्टी ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । तसर्थ प्याज दिनहुँ खाने गर्नाले पेट दुख्ने, आन्द्राको संक्रमण लगायतका जोखिम कम हुन्छ ।
८, निद्रा नपर्ने समस्या भएकाहरुका लागि प्याजको सेवन लाभदायक हुन्छ । बेलुकीको खानामा प्याजलाई सलादको रुपमा खाने गर्नाले मीठो निद्रा पर्छ ।
९,मधुमेहको जोखिम घटाउँछ । प्याजमा कम मात्रामा क्यालोरी हुन्छ । साथै यसमा फाइबर, आइरन, पोटासियम, भिटामिन्स तथा अन्य विभिन्न खाले पोषक तत्व समेत हुन्छ । त्यसैले प्याजको सेवनले रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलित गराउन सहयोग गर्छ । साथै मधुमेहका रोगीको लागि समेत प्याजको सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।
१०, मुखबाट गन्ध आउने तथा दाँत, गिँजा र मुखमा संक्रमण भएका हरुका लागि प्याजको सेवन फाइदाजनक हुन्छ । प्याजको सेवनले मुखमा रहेका हानिकारक जिवाणु नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
यी हुन् चुम्बनबाट सर्ने ७ प्रकारका रोग
विवाहको भोलिपल्ट श्रीमतीलाई ‘म समलिंगी हुँ’ भनेपछि… यस्तो सम्म बज्रपात पर्यो
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (825)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (389)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (369)
नेपाली नायिकाहरुले लगाउने भित्री वस्त्रको मूल्य कत्ति ? सुनेर तपाईंको होस उड्नेछ [भिडियो हेर्नुहोस ] (354)
जहाँ केटीहरु विवाह गर्न केटा नपाएर तड्पिन्छन [भिडियो हेर्नुहोस ] (275)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (236)
के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने , हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ!!! (143)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (138)